မန်ယူကစားသမားတွေကို ခြွေချပစ်တဲ့ ညစာစားပွဲက ရော်နယ်ဒိုရဲ့ မိန့်ခွန်း – Sports Soccer News
မန်ယူကစားသမားတွေကို ခြွေချပစ်တဲ့ ညစာစားပွဲက ရော်နယ်ဒိုရဲ့ မိန့်ခွန်း
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ယန်းဘွိုင်း အသင်းနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ကစားဖို့ ဆွစ်ဇာလန် နိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒဏ်ရာ ပြသနာရှိနေတဲ့ ကာဗာနီ နဲ့ ရက်ဖို့ဒ်ကလွဲရင် လူစုံနီးပါး လိုက်ပါသွားတာဖြစ်ပြီး အသင်းရဲ့ ညစာစားပွဲမှာ အသင်းကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့ ရော်နယ်ဒိုက မိန့်ခွန်းပြောကြားသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပရိတ်သတ် အချစ်တော် ကစားသမားဟာ ဩဇာကြီးမားလွန်းပြီး စိတ်ခွန်အားတွေပေးနိုင်တဲ့စကားလုံးတွေကို ပြောပြသွားပြီး အခန်းထဲထိုင်နေတဲ့ ရှိသမျှကစားသမားတွေ၊ နည်းပြတန်းဝန်ထမ်းတွေအားလုံး တိတ်တဆိတ်ပဲနားထောင်ခဲ့ကြတယ်။
“ကျနော် ယူနိုက်တက်ကိုပြန်လာရတဲ့အကြောင်းပြချက်က (၂)မျိုးပဲရှိတယ်။ ပထမအချက်က ကျနော် ဒီအသင်းကိုတကယ်ချစ်လို့ပါ။ နောက်တစ်ချက်က ဒီအသင်းမှာအစဥ်အဆက်ပေါက်ဖွားလာတဲ့ အနိုင်မခံအရှုံးမပေးတတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်ပါပဲ”
“စည်းရုံးရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်လို့ ကျနော်ဒီကိုပြန်လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့သိထားပါ။ ဒီအသင်းမှာအောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားတို့အားလုံးရဲ့နှလုံးသားထဲကနေ ဒီအသင်းကိုချစ်တတ်ဖို့တော့လိုမယ်”
“စားစရာရှိတာစား၊ အိပ်ရမယ့်အချိန်မှာအိပ်။ ပြီးရင် အသင်းအတွက်ရသလိုသာတိုက်ပွဲဝင်ကြ။ ပွဲထွက်ကစားခွင့်ရသည်ဖြစ်စေ/မရသည်ဖြစ်စေ ကိုယ့်အသင်းဖော်တွေကိုအားပေးရမယ်၊ အသင်းအတွက် အမြဲရာနှုန်းပြည့်ပေးဆပ်နိုင်ရမယ်”
“ကျနော်ဒီကိုပြန်လာတယ်ဆိုတာ အောင်မြင်မှုလိုချင်တာကလွဲပြီး တစ်ခြားဘာမှကျနော့်ခေါင်းထဲမရှိဘူး။ အောင်မြင်မှုဆိုတဲ့အရာက ကျနော်တို့အတွက် ပျော်ရွှင်မှုကိုယူဆောင်လာပေးမယ့်တစ်ခုတည်းသောအရာပဲ။ ကျနော်ပျော်ချင်တယ် ခင်ဗျားတို့ရော?”
“ခင်ဗျားတို့အားလုံးက အံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့ကစားသမားတွေပါ။ ခင်ဗျားတို့အားလုံးကို ကျနော်ယုံတယ်။ ကျနော်သာအယုံအကြည်မရှိဘူးဆိုရင် ဘာလို့ပြန်လာနေဦးမှာလဲ? ခင်ဗျားတို့သာရာနှုန်းပြည့်အားစိုက်မယ်ဆိုရင် ပရိသတ်တွေကလည်း ခင်ဗျားတို့ကိုထောက်ခံမှုအပြည့်ပေးကြမှာ။
ကျနော်က အောင်မြင်မှုကိုဆာလောင်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုး ဖန်တီးချင်ယုံသက်သက်ပဲ။ ဒီတော့ ကျနော်တစ်နေ့အနားယူသွားတဲ့အခါ ဒီစိတ်ဓာတ်ကဒီအသင်းမှာကျန်နေဦးမှာပါ။ နောက်ပြီး ဟောဒီကစားသမားအစုအဖွဲ့ကလည်း ဘောလုံးလောကမှာဆက်ပြီးကြီးစိုးနေဦးမှာ။ တစ်ချိန်က ဘောလုံးလောကကို ကျနော်တို့အကြီးအကျယ်လွှမ်းမိုးခဲ့သလိုမျိုးပေါ့”
“အသင်းအတွက် အကောင်းဆုံးဆိုတာတွေကိုပဲကျနော်လုပ်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားတို့ရဲ့အကူအညီကိုလည်းလိုတယ်။ ခင်ဗျားတို့ တိုက်ပွဲဝင်ဖို့အသင့်ပဲလား? ကွင်းထဲရောက်ရင် ဘာကိုမှထိန်ချန်မထားဘဲပေးဆပ်ကစားဖို့ အဆင်သင့်ပဲလား?” ခွန်အားတွေအပြည့်ပါတဲ့သူ့စကားအဆုံးမှာ တစ်ခန်းလုံးလက်ခုပ်သံတွေညံသွားတယ်။
မန္ခ်က္စတာ ယူနိုက္တက္အသင္းဟာ ယန္းဘြိုင္း အသင္းနဲ႕ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ကစားဖို႔ ဆြစ္ဇာလန္ နိုင္ငံကို ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒဏ္ရာ ျပသနာရွိေနတဲ့ ကာဗာနီ နဲ႕ ရက္ဖို႔ဒ္ကလြဲရင္ လူစုံနီးပါး လိုက္ပါသြားတာျဖစ္ၿပီး အသင္းရဲ႕ ညစာစားပြဲမွာ အသင္းကိုျပန္လည္ေရာက္ရွိလာတဲ့ ေရာ္နယ္ဒိုက မိန႔္ခြန္းေျပာၾကားသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ပရိတ္သတ္ အခ်စ္ေတာ္ ကစားသမားဟာ ဩဇာႀကီးမားလြန္းၿပီး စိတ္ခြန္အားေတြေပးနိုင္တဲ့စကားလုံးေတြကို ေျပာျပသြားၿပီး အခန္းထဲထိုင္ေနတဲ့ ရွိသမွ်ကစားသမားေတြ၊ နည္းျပတန္းဝန္ထမ္းေတြအားလုံး တိတ္တဆိတ္ပဲနားေထာင္ခဲ့ၾကတယ္။
“က်ေနာ္ ယူနိုက္တက္ကိုျပန္လာရတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္က (၂)မ်ိဳးပဲရွိတယ္။ ပထမအခ်က္က က်ေနာ္ ဒီအသင္းကိုတကယ္ခ်စ္လို႔ပါ။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ဒီအသင္းမွာအစဥ္အဆက္ေပါက္ဖြားလာတဲ့ အနိုင္မခံအရႈံးမေပးတတ္တဲ့စိတ္ဓာတ္ေၾကာင့္ပါပဲ”
“စည္း႐ုံးေရးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခ်င္လို႔ က်ေနာ္ဒီကိုျပန္လာတာမဟုတ္ဘူးဆိုတာေတာ့သိထားပါ။ ဒီအသင္းမွာေအာင္ျမင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ခင္ဗ်ားတို႔အားလုံးရဲ႕ႏွလုံးသားထဲကေန ဒီအသင္းကိုခ်စ္တတ္ဖို႔ေတာ့လိုမယ္”
“စားစရာရွိတာစား၊ အိပ္ရမယ့္အခ်ိန္မွာအိပ္။ ၿပီးရင္ အသင္းအတြက္ရသလိုသာတိုက္ပြဲဝင္ၾက။ ပြဲထြက္ကစားခြင့္ရသည္ျဖစ္ေစ/မရသည္ျဖစ္ေစ ကိုယ့္အသင္းေဖာ္ေတြကိုအားေပးရမယ္၊ အသင္းအတြက္ အၿမဲရာႏႈန္းျပည့္ေပးဆပ္နိုင္ရမယ္”
“က်ေနာ္ဒီကိုျပန္လာတယ္ဆိုတာ ေအာင္ျမင္မႈလိုခ်င္တာကလြဲၿပီး တစ္ျခားဘာမွက်ေနာ့္ေခါင္းထဲမရွိဘူး။ ေအာင္ျမင္မႈဆိုတဲ့အရာက က်ေနာ္တို႔အတြက္ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈကိုယူေဆာင္လာေပးမယ့္တစ္ခုတည္းေသာအရာပဲ။ က်ေနာ္ေပ်ာ္ခ်င္တယ္ ခင္ဗ်ားတို႔ေရာ?”
“ခင္ဗ်ားတို႔အားလုံးက အံ့ဩဖို႔ေကာင္းတဲ့ကစားသမားေတြပါ။ ခင္ဗ်ားတို႔အားလုံးကို က်ေနာ္ယုံတယ္။ က်ေနာ္သာအယုံအၾကည္မရွိဘူးဆိုရင္ ဘာလို႔ျပန္လာေနဦးမွာလဲ? ခင္ဗ်ားတို႔သာရာႏႈန္းျပည့္အားစိုက္မယ္ဆိုရင္ ပရိသတ္ေတြကလည္း ခင္ဗ်ားတို႔ကိုေထာက္ခံမႈအျပည့္ေပးၾကမွာ။
က်ေနာ္က ေအာင္ျမင္မႈကိုဆာေလာင္ေနတဲ့စိတ္ဓာတ္မ်ိဳး ဖန္တီးခ်င္ယုံသက္သက္ပဲ။ ဒီေတာ့ က်ေနာ္တစ္ေန႕အနားယူသြားတဲ့အခါ ဒီစိတ္ဓာတ္ကဒီအသင္းမွာက်န္ေနဦးမွာပါ။ ေနာက္ၿပီး ေဟာဒီကစားသမားအစုအဖြဲ႕ကလည္း ေဘာလုံးေလာကမွာဆက္ၿပီးႀကီးစိုးေနဦးမွာ။ တစ္ခ်ိန္က ေဘာလုံးေလာကကို က်ေနာ္တို႔အႀကီးအက်ယ္လႊမ္းမိုးခဲ့သလိုမ်ိဳးေပါ့”
“အသင္းအတြက္ အေကာင္းဆုံးဆိုတာေတြကိုပဲက်ေနာ္လုပ္မွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕အကူအညီကိုလည္းလိုတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ တိုက္ပြဲဝင္ဖို႔အသင့္ပဲလား? ကြင္းထဲေရာက္ရင္ ဘာကိုမွထိန္ခ်န္မထားဘဲေပးဆပ္ကစားဖို႔ အဆင္သင့္ပဲလား?” ခြန္အားေတြအျပည့္ပါတဲ့သူ႕စကားအဆုံးမွာ တစ္ခန္းလုံးလက္ခုပ္သံေတြညံသြားတယ္။
ချယ်လ်ဆီးသာ ချန်ပီယံလိဂ် ၂ နှစ်ဆက်ရမယ်လို့ ယုံကြည်နေတဲ့ ဂျိုးကိုးလ်
ရော်နယ်ဒို အသင်းပြောင်းသွားတဲ့ ကောင်းကျိုးတွေကို ပြောလိုက်တဲ့ ခီရယ်လီနီ